एसाइलीको स्टाटस पाउन सक्छिन् ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७४-१२-७ बिचार / प्रतिक्रिया
मेरो असाइलम निवेदन स्वीकृत भएको ६ महिना भयो । अहिले मेरो विवाह हुने कुरा चलिरहेको छ । मेरो हुनेवाला श्रीमतीको केही पनि भिसा छैन । उनी दुई वर्षअघि टुरिष्ट भिसामार्फत आएर त्यसै बसेकी छिन् । यदि मेरो विवाह भयो भने के मैले कुनै निवेदन उनका लागि पेश गर्न सक्छु होला ? अर्थात् एसाइलीको स्टाटस उनले पनि पाउन सक्छिन् कि ? उत्तरको लागि धन्यवाद ।
– धिरज, न्यूयोर्क
एसाइलीको स्पाउस र अनडिभेज (२१ वर्ष नपुगेका) चिल्डे«नले पनि डेरिभेटिभ एसाइलीको स्टाटस पाउने अमेरिकाको एसाइलमसम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको छ । तर, सो स्टाटस पाउनका लागि त्यस्तो नाता वा रिलेसन प्रिन्सिपल एसाइलीको एसाइलम एप्लिकेसन स्वीकृत हुनुअगावै स्थापित भइसकेको हुनुपर्नेछ । अर्थात् एसाइलम एप्लिकेसन एप्रुभ हुनुअगावै वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेको हुनुपर्नेछ । एसाइलम एप्लिकेसनको एप्रुभलपछि विवाह भई स्पाउजल सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा सो स्पाउसले डेरिभेटिभ एसाइली स्टाटस पाउन सक्दैन । त्यसैले तपाईंको केसमा तपाईंको श्रीमतीले डेरिभेटिभ एसाइली स्टाटस तपाईंमार्फत पाउन सक्नुहुन्न । तर, तपाईंले ग्रीनकार्ड पाइसकेपछि तपाईंको श्रीमतीलाई फेमिली पेटिसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ । तर, तपाईंको श्रीमती आउट अफ स्टाटस भएकोले तपाईंको युएस सिटिजनसिप भएपछि मात्र उहाँले ग्रीनकार्ड पाउनु हुनेछ ।
म युएस सिटिजन हुँ । मैले एक नेपाली युवतीसँग विवाह गरेको छु । मैले इमिग्रेसन पेटिसन प्रोसेस गरेर २ महिनाअघि उसको अन्तरवार्ता काठमाडौंको युएस एम्बेसीमा पनि भयो । एम्बेसीले एड्मिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङ भनेर केही जबाफ अहिलेसम्म दिएको छैन । के गर्ने होला ? र कसरी भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ होला ? जबाफको लागि धन्यवाद ।
– आयुष्मान, अमेरिका
साधारणतया एम्बेसीमा भिसा अन्तरवार्ता भइसकेपछि ३ कुरा हुन सक्छ । (१) भिसा एप्रुभ गरी पासपोर्ट लिनका लागि डेट दिनेछ, (२) एडिसनल डकुमेन्टहरु माग्न सक्छ, वा (३) एड्मिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङमा राख्न सक्छ । कुनै पनि भिसा एप्लिकेसनलाई अन्तरवार्तापछि एडमिनिष्ट्रेटिभ प्रोसेसिङ (एपी)मा राखेपछि कति समयभित्रमा एपी पूरा हुन्छ भन्ने कुनै नियम वा पोलिसी छैन । अहिलेसम्म देखिएको प्राक्टिसमा एभरेजमा २ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि भिसा एप्लिकेसन पेन्डिङ भएको देखिएको छ । कुनै पनि भिसा एप्लिकेसन (एपी)मा रहने कारण (केस बाई केस) कुनै पनि हुन सक्छ । ब्याकग्राउण्ड चेकदेखि भिसा एप्लिकेसनको जेन्युननेस वा अथेन्टिसन कुनै पनि हुन सक्छ । तपाईंको केसमा समयसमयमा युएस कन्सुलेट, काठमाडौंमा इन्क्वायरी गर्ने सुझाव छ ।